Galatifo 2 NA-TWI - Paulo ne asomafo a aka no - Mfe dunan - Bible Gateway
Galatifo 1Galatifo 3
Galatifo 2 Nkwa Asem (NA-TWI)
2 Mfe dunan akyi, me ne Barnaba san kɔɔ Yerusalem. Mede Tito nso kaa me ho. 2 Mekɔe efisɛ, Onyankopɔn na ɔdaa no adi kyerɛɛ me sɛ menkɔ. Me ne mpanyimfo no yɛɛ nhyiam kokoam kyerɛkyerɛɛ asɛmpa a meka mekyerɛɛ Amanamanmufo no mu kyerɛɛ wɔn. Na mempɛ sɛ m’adwuma a mayɛ dedaw ne nea migu so reyɛ no yɛ ɔkwa. 3 Ɛwom sɛ me hokafo Tito yɛ Helani de, nanso wɔanhyɛ no sɛ ontwa twetia, 4 na mmom, nnipa bi a wɔboapa yɛɛ wɔn ho sɛ anuanom no bi a wɔde wɔn ho abɔ kuw no pɛe sɛ wotwa no twetia. Saa nnipa yi baa yɛn mu sɛ akwansrafo bɛhwɛɛ ahofadi a yɛnam yɛn a yɛne Kristo ayɛ baako so anya no, na wɔnam so adan yɛn nkoa no. 5 Sɛnea ɛbɛyɛ a Asɛmpa no bɛtena mo nkyɛn nti, yɛamma wɔn kwan koraa.